ICE MBR Membrane Module yeindasitiri Wastewater Kurapa kweKutonhora Shongwe Sisitimu
Membrane Bioreactor (MBR) rudzi rwehunyanzvi hwemberi hwakagadzirwa kubvira kupera kwezana ramakore rechi20 iro rakaona musanganiswa wehunyanzvi hwekuparadzanisa tekinoroji netekinoroji yehupenyu. Iyo membrane yekuparadzanisa tekinoroji inotsiva yetsika inoshanda sludge nzira uye yakajairwa firita unit; kugona kwayo kwakasimba kwekuparadzanisa kunogona kuita kuti SS turbidity padyo ive zero. Hydraulic yekuchengetedza nguva (HRT) sludge zera (SRT) rakaparadzaniswa zvachose; iyo nzira yekubudisira mvura iri mune yakanaka uye yakagadzikana mhando iyo inozoshandiswazve pasina yechitatu nhanho kurapwa. Iro remvura ine hupfumi uye inoshanda ine chengetedzo yepamusoro, chiyero chekushandiswazve kwemvura yemvura yakasviba chakawedzerwa zvakanyanya.
Counter-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera
Mhepo yakanyoroveswa yakaoma inopinda nepakati pemahombekombe pamativi ese eshongwe muzasi, uye ndokukwevera kumusoro uye pamusoro pemakosi nesimba rinobva kune axial fan yakaiswa pamusoro, ichishatisa mvura inodonha (yakabva kuhurongwa hwekuparadzira mvura) uye kuwedzera iko kuchinjisa kwehunyanzvi munzvimbo yemhepo inopisa yakanyorova yakaburitswa kunze kweshongwe ichienda mumhepo. Munguva yekushanda uku, hushoma hwemvura inotenderera zvakare inopwa nekuda kwekudziya kwekupedzisira kwehusiku kuburikidza nehubhu uye madziro emakoroni, kubvisa kupisa kubva muchirongwa. Mune ino modhi yekushanda, nekuda kweiyo evaporative performance inodzora iyo inosara tembiricha yemvura uye iyo fan fan yakachengetedzwa.
Yakatemerwa Dhaidhi Kutonhora Towers neRectangular Chitarisiko
Iyo yakavhurika yedunhu inotonhorera shongwe zvishandiso zvinoshandisa echisikigo musimboti: hushoma huwandu hwemvura hunodzinga kupisa neanomanikidzwa kubuda kwemhepo kutonhodza pasi akakodzera machira.
ICE Chemical Dosing System yeMvura Kurapa muKutonhodza Shongwe Sisitimu
Iyo inotonhodza sisitimu yekushanda inokanganisa zvakananga kuvimbika, kugona, uye mutengo wechero ipi maindasitiri, masangano, kana simba indasitiri maitiro. Kuongorora uye kuchengetedza kudzora kweyekuora, kuisirwa, kukura kwehutachiona, uye mashandiro ehurongwa zvakakosha kupa huwandu hweMutengo Wese weKushanda. Nhanho yekutanga yekuwana zvishoma iri kusarudza yakakodzera kurapwa chirongwa uye mashandiro ezvinhu kudzikisira masisitimu anodzvinyirira.
ICE Maindasitiri Emvura Softener Sisitimu Yekutonhora Shongwe Kunobva Mvura
Kupfava kwemvura inzira yekuchenesa mvura iyo inoshandisa tekinoroji yekuchinjana yeoniyoni kubvisa zvicherwa zvinowanzoitika zvakaita secalcium uye magnesium kubva mumvura kudzivirira kuwanda mumapombi nemidziyo. Maitiro acho anowanzo shandiswa mune zvekushambadzira uye zvemaindasitiri marongero ekurerutsa nyore-kwekushandisa uye kuwedzera hupenyu hwese hwekushandisa mvura-yekubata.
ICE Yakakwira Kushanda Kwejecha Kuchenesa Sisitimu Yekutonhora Towers 'Kutenderera Kwemvura Kurapa
Zvimedu zvinokonzeresa kusvibiswa kwenzvimbo dzekufambisa kupisa zvidiki pane mashanu ma microns. ICE yakanyanya kushanda kutonhodza shongwe yemvura mafirita inobvisa izvi zvakanyatsonaka zvidimbu kuti zvipe iwo echokwadi mabhenefiti akachena kutonhora mvura.
Yakakwira-inoshanda Evaporative Condenser yeiyo Industrial Refrigeration / Cold Chain Maitiro / HAVC Sisitimu